နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း(၃၀)မှ ၁၉၈၂ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေ ဖျက်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆို ~ Rohingya Blogger
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း(၃၀)မှ ၁၉၈၂ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေ ဖျက်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆို
မူရင်း မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အာရှနှင့်သြစတြေး လျနိုင်ငံများမအစိုးရ အခြေစိုက်မ ဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၀ မှ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရထံသို့ နိုင်ငံတ ကာစံချိန်စံညွန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသော ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေအားဖျက်သိမ်း ပေးရန်လက်မှတ်ထိုး၍ ယနေ့တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံအက်ဥပဒေသည် ယခင်စစ်အာဏာရှင်ဦးနေ၀င်းမှပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောဥပဒေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါအချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်နှစ်ပေါင်း များစွာနေထိုင်လာကြသော အချို့သောလူမျိုးများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် အခွင့်အရေး များဆုံး ရှုံးနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသည့်အချိန် ၁၉၄၈၌ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောနိုင်ငံသားအက်ဥပဒေတွင် မြန်မာနိုင်ငံနယ် နိမိတ်အတွင်း မျိုးဆက်နှစ်ခုမှမိမိတို့၏မိခင်နိုင်ငံအဖြစ်နေထိုင်သူများ၊ မိမိတို့၏မိဘများ သည်မြန် မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းမွေးဖွားနေထိုင်လာသူတိုင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်ဟုပါရှိသည်။ ယခုအဖွဲ့အစည်း( ၃၀ )မှလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုသောထုတ်ပြန်ချက်သည် ရိုဟင်ဂျာ များနိုင်ငံသားဖြစ် ခွင့်ရရှိရေးဟု ရေးသားထားခြင်းမရှိသော်လည်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်သည် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ အတွက်အဓိကရည်ရွယ်သည်ဟု သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ရည် ရွယ်ရခြင်း မှာလည်း စစ်အာဏာရှင်ဦးနေ၀င်းမှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး နောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆုံးရှုံးပြီး နိုင်ငံမဲ့ဘ၀သို့ရောက်ခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေးမရမှီနှင့် လွတ်လပ်ရေးပြီးခေတ် များတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ သည်အခြားသောတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများကဲ့သို့ တူညီသော တန်းတူ အခွင့်အရေး များရရှိရုံမက၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရလက်ထက်တွင်ဝန်ကြီးအဆင့်ရာထူး၊ ပါလီမန် အတွင်းဝန်များပင် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှစ၍ ခွဲခြားနှိမ့်ချ၍ ဆက်ဆံခြင်း များအရှိန် အဟုန်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ လက်ထပ်ခွင့်နှင့် ခရီးသွားလာခွင့်များကို ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂမှ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိနှိပ်ခံရဆုံး လူမျိုးအဖြစ် သတ် မှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်တွင် ကုလသမဂ္ဂ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတို့မှ မိမိတို့၏တောင်း ဆိုနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနှင့်မကိုက်ညီသော ၁၉၈၂ ခုနှစ်နိုင်ငံသား အက်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက် ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးရန်ပန်ကြားထားသည်။ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့်ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသားအက် ဥပဒေတစ်ရပ်ကိုပြဋ္ဌာန်း၍ အစားထိုး ရန်လိုကြောင်းရေးသားထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာများ ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေတစ်ရပ်လိုအပ် သည်များကိုကူညီပေးရန် လည်းတောင်း ဆိုထားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နော်ဝေးနိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သည့်လ (၁၈) ရက်နေ့၌ ပြောကြားရာတွင် အကယ် ၍နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မည်သူမည်ဝါမှရှိသည်ကိုနိုင်ငံသားဥပဒေအရပြတ်ပြတ်သားသားသိခွင့်ရှိလျှင် ပြဿနာများယခုကဲ့သို့အမြဲပေါ်ပေါက် နေမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အချို့သောသူများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မှမဟုတ်၊ အချို့သောသူများသည်မြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ် ဟုစွပ်စွဲနေခြင်းများရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Actions Birmanie Altsean-Burma Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC), Asian Forum for Human Rights and Development Association Suisse Birmanie Burma Action Ireland Burma Aktion Burma Campaign Australia Burma Campaign UK BurmaInfo (Japan) Burma Partnership Chin Human Rights Organization Christian Solidarity Worldwide ESP-Stockholm Forum for Democracy in Burma Free Burma Campaign (South Africa) Initiatives for International Dialogue (IID) International Federation for Human Rights (FIDH) Info Birmanie Institute for Asian Democracy Norwegian Burma Committee Odhikar Open Society Foundations People’s Forum on Burma (Japan) People in Need Physicians for Human Rights Restless Beings Society for Threatened Peoples Swedish Burma Committee United to end Genocide US Campaign for Burma By:RB News Desk
Situation in Rakhine (Arakan) State and the Rule of Law - Statement by 30 Organisations 09 Jul 2012 Recent events in Rakhine (Arakan) State, Burma, have many causes which need to be addressed. On all sides, however, there is agreement that there needs to be clarification and proper implementation of citizenship laws. Speaking in Norway on 18th June 2012, Aung San Suu Kyi said: “If we were very clear as to who are the citizens of the country, under citizenship laws, then there wouldn’t be the problem that is always coming up, that there are accusations that some people do not belong in Bangladesh, or some people do not belong in Burma.” The Citizenship Law introduced by General Ne Win in 1982 is not compatible with the Universal Declaration of Human Rights or with Burma’s legal obligations under international treaties. It arbitrarily stripped many people in Burma of the right to citizenship. The 1982 Citizenship Law should be repealed, and replaced withanew law founded on basic principles of human rights. The new law should honour equality and non-discrimination, and help create an inclusive and tolerant Burma. The law should comply with Burma’s obligations under the United Nations Convention of the Rights of the Child, to which it isasignatory. Article7of this Convention states: 1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth toaname, the right to acquireanationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless. The new law should also be compatible with the Universal Declaration of Human Rights, which states in Article 15: 1. Everyone has the right toanationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality We call upon the government of Burma, the National League for Democracy and all political parties in Burma to support the repeal of the 1982 Citizenship Law, and for it to be replaced withanew law based on principles of human rights and equality, in particular on Burma’s obligations under Article7of the Convention on the Rights of the Child, ratified in 1991. We call upon the United Nations, our own governments, and the rest of the international community to express support for the repeal of the 1982 Citizenship Law, and for it to be replaced withanew law based on principles of human rights and equality. Governments and the United Nations should encourage all parties in Burma to support such reform, and provide technical assistance and support, where required, in the drafting ofanew law. The United Nations Convention on the Rights of the Child can be viewed here: The 1982 Citizenship Law of Burma can be viewed here:
Altsean-Burma Asia Pacific Solidarity Coalition (APSOC),
Burma Aktion Burma Campaign Australia
By ကိုကျော်ကျော်သိန်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအသစ်တရပ် ပြဌာန်းဖို့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေက တိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဥပဒေ ဟာ လူ့အခွင့် အရေး စံချိန် စံညွှန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်တွေကိုလည်း ချိုးဖောက်ရာ ကျနေတယ်လို့ ထောက်ပြကြပြီး ဥပဒေအသစ်ပြဌာန်းဖို့ တောင်းဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်ပြောပြပါမယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အစိုးရ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်းနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ မဖြစ်သလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်တွေပါ ဥပဒေနဲ့အညီ မြန်မာ နိုင်ငံကလိုက်နာရမယ့် တာဝန်တွေနဲ့လည်း မကိုက်ညီဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ က အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၃၁ ဖွဲ့က ထောက်ပြလိုက်ကြတာပါ။
“အဲဒီဥပဒေဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကလေး သူငယ်တွေ ရဲ့ အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံ သား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေက ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ် ကို ဖောက်ဖျက်နေပါတယ်။”
၈၂ ခုနှစ်ဥပဒေအရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရ တာ၊ နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ဦး ကမွေးဖွားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်း နိုင်ငံပြင်ပ၊ ဥပမာအားဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မိဘတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ ဒုက္ခသည် မိဘတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ မစ္စတာဖားမနားတို့က ထောက်ပြကြတာပါ။
အဲဒီဥပဒေဟာ အဲဒီခေတ် အဲဒီအချိန်က လိုအပ်ချက်နဲ့အညီ ပြဌာန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်တော့တဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေ ပါနေတယ်ဆိုတာကို လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးမင်းလွင်ဦးက သဘောတူ ပါတယ်။
“နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို လျှောက်ထားတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ကလေးတွေရဲ့ ခံစားခွင့်တွေ၊ ကလေးတွေ ရဲ့ ကျောင်းနေ ပိုင်ခွင့်တွေ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အတိ အလင်း ပြဌာန်းထားတာမရှိတာကို ကျနော် တို့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့တခါ အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်ခင် မိဘဖြစ်တဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ ကလေး ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်လွှာတင်ပေးဖို့လိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကို နဂိုရ်မိဘနှစ်ပါးက မေ့လျော့ခဲ့လို့ရှိရင် ဒီကလေးရဲ့ အခွင့်အရေးတွေက အလိုလို ဆုံးရှုံးနေတာတွေကို ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ ဒီဥစ္စာတွေကတော့ ခေတ်နောက်ကျတယ်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ အဲဒီလို ကိစ္စရပ်တွေကတော့ တချို့ ပြင်သင့်တယ်ဆိုတာလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။”
အခုလိုအချိန်မှာမှ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ လက်ရှိဥပဒေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး ဥပဒေ အသစ်ပြဌာန်းဖို့ တောင်းဆိုရတာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်မှာ မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ တောင်းဆိုကြတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေအတွက် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင် သူတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူဖို့ မြန်မာအစိုးရဟာ ပိုပြီး ပွင့်လင်းလာတာကြောင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအသစ်တရပ် ပြဌာန်းဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း UNICEF ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတို့လို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အကူအညီပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားကြမှာပါလို့ မစ္စတာ ဖားမနားက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကူအညီပေးချင်ကြ တဲ့ နိုင်ငံတကာက ရှေ့နေတွေလည်း ကမ္ဘာတ၀န်းမှာရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအသစ်တရပ်ပြဌာန်းဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုကြတဲ့အဖွဲ့ ၃၁ ဖွဲ့ထဲမှာ Burma Campaign UK အဖွဲ့နဲ့အတူ ချင်း လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၊ Open Society Foundations၊ US Campaign for Burma စတဲ့ ဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာက အဖွဲ့အစည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Unknown13 July 2012 18:21You rohingyas are illegal migrants and your parents are not Myanmar Citizens. So Myanmar government and Myanmar people don;t want to give Myanmar National ID to your Rohingyas. You rohingyas are Bangladesh Citizens. Fuck you all Rohingyas separatists and terrorists.ReplyDeleteAdd commentLoad more...